PSJTV | उपेन्द्र र लक्ष्मणलाल दिल्लीमा, के पकाएर आउने हुन्?
नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकीको रुचि प्रस्टिन्छ, मधेशवादीसहित बाबुरामहरूको बलियो गठबन्धन बनाउनमा। र, तयसका पछिल्ला विवरण प्राप्त भएका छन्। नेपालमा देखिने गरी वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनुपर्ने छिमेकीको सोच छ।
काठमाडौंमा पुलिसतर्फ होस् वा अरूतर्फ, भारतले डीआईजीस्तरका अधिकारी खटाउने गर्छ। तर विवेक जोहेरी त्योभन्दा माथिल्लो दर्जाका हुन्, एडीजीपी। अर्थात्, नेपालको एआईजीजत्तिकै। पोहोरदेखि दिल्लीमा छन्।
‘रअ’ को प्रमुख हुने लाइनमा थिए, तर सामन्तकुमारले टप्काइदिए। अहिले जोइन्ट सेक्रेटरी छन्, चिफको लाइनमा।
उता ‘रअ’ लाई सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिने कारण नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास थालिएको छ। र, नेपालबारे उनैको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। बाबुराम, राजेन्द्र महतोहरूसँग विवेकको राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यहीअनुसार भूमिका खेल्ने नै भए। सोहीअनुरूप अहिले बाबुरा र महतोलाई सहमत गराएर वैकल्पिक शक्ति बनाउन प्रेरित गरेका छन्। उनको सुझवा हो,‘उदार प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्नुस्। त्यसपछि कांग्रेस र नेकपाका मान्छेलाई तान्ने भूमिका खेल्नुस्।’
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतको अहिलेको परिदृश्य हो, विभिन्न ठाउँ घुम्ने, ऊर्जा, व्यापार, सीमा सुरक्षाका कुरा गर्ने। तर राजनीतिक कुरामा त्यति चासो नदेखाउने। दोस्रो हैसियतका डीसीएम छन्, विनयकुमार। आरएसएसनिकट उनी भने राजनीतिक मामिलामा सक्रिय छन्। यो खबर आज भदौ १८ गते प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ।
भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले अघिल्लो महिना काठमाडौं आउँदा उनैमार्फत हो, महन्थ ठाकुरहरूसँग एउटै लहरमा बसेर गफगफ गरेका। छिमेकीतिरबाट यस्ताखाले भूमिका बाक्लिनाको खास कारण हो, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने मामिलामा नेपाली कांग्रेस र राजपालाई निकट ल्याउनु। कांग्रेसलाई प्रस्तावकका रूपमा अगाडि सार्ने र बिस्तारै–बिस्तारै नेकपाका केही मान्छे तान्ने रणनीति छ।
भारतले यो मुद्दामा पहिला कमल थापालाई अगाडि सार्यो। तर त्यो अस्त्र फलदायी भएन। राजालाई अघि बढाउँदा स्वार्थ बाझिने भयो। उनले आज हिन्दू राज्य, भोलि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको लोभ गर्ने नै भए। त्यो अभीष्ट पूरा गर्न नसकिँदा पूर्वराजासँग सहकार्य खासै हुन सकेको छैन।
यदि पूर्वराजासँग सहयकार्य गर्ने हो भने एजेन्डा नै डाइभर्ट हुने खतरा देखेपछि अहिले मधेशवादीहरूसँग बाबुरामहरूलाई मिलाउने काम भइरहेको बताइन्छ। संघीय समाजवादी, राजपा र कांग्रेसलाई चुनावसम्मको गठबन्धन बन्ने गरी छिमेकीले अगाडि बढाउन खोजेको छ।
यसबचि पार्टी एकताका धेरै कुरा अगाडि बढ्दा उपेन्द्र यादवले मर्यादाक्रमको मुद्दा अगाडि सारेर एकता गर्न तयार राजपा नेताहरूाई झस्काइदिएका छन्। उनको नयाँ प्रस्तावअुनसार महन्थ मानार्थ अध्यक्ष, बाबुराम राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष र आफू कार्यकारी अध्यक्ष हुनेछ।
त्यसअघि राजेन्द्र महतोले चार अध्यक्षको फर्मुला ल्याएका थिए, महन्थ, उपेन्द्र, आफू, बाबुरामसहितको। अहिले विभागहरू मिलाउने गरी राजेन्द्रलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ। महन्थलाई मानार्थ अध्यक्ष बनाउने भनिएपछि उनी बिच्किएका छन्। यसबीच उपेन्द्र, लक्ष्मणलाल कर्णहरू दिल्लीमा छन्। त्यहाँबाट के पकाएर आउने हुन्? हेर्न बाँकी नै छ।